ब्रोशर, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
त्रिएकवादी क्रिष्ट-केन्द्रित ईश्वरशास्त्र
भगवान को विश्वव्यापी चर्च को मिशन (WKG) येशूसँग बस्न र सुसमाचार प्रचार गर्न को लागी हो। येशू र उनको अनुग्रहको शुभ समाचारको बारेमा हाम्रो समझ २० औं शताब्दीको अन्तिम दशकमा हाम्रो शिक्षाको सुधारको माध्यमबाट मौलिक रूपमा परिवर्तन भएको छ।
WKG को beliefs 35 मान्यता
सिद्धान्तहरूमा लेखहरूको संग्रह,
जुन विश्वव्यापी चर्च अफ भगवानको मान्यतामा उल्लेख गरिएको छ
भगवानको राज्य - डा। ग्यारी डेड्डो
परमेश्वरको राज्य सँधै इसाई शिक्षाको केन्द्रबिन्दु नै रहेको छ, र ठीक त्यस्तै छ। यसबारे एउटा विवाद उत्पन्न भयो, विशेष गरी २० औं शताब्दीमा। बाइबलीय सामग्रीको आकार र जटिलता र यस शीर्षकसँग ओभरल्याप हुने असंख्य ईश्वरशास्त्रीय विषयहरूका कारण सम्झौता प्राप्त गर्न गाह्रो छ। त्यहाँ आध्यात्मिक मनोवृत्तिमा पनि ठूलो भिन्नताहरू छन् जसले विद्वान र पादरीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्छन् र उनीहरूलाई सबै भन्दा भिन्न निष्कर्षमा पुग्न अनुमति दिन्छन्।
चर्चमा महिलाको भूमिका (WKG)
के महिलाले एल्डरको रूपमा सेवा गर्न सक्छन्?
के बाइबलमा पुरुष र महिलाका लागि फरक भूमिकाको आवश्यकता छ?
पुरानो नियममा महिला र पुरुषहरूको भूमिका के हो?
येशूले स्त्रीहरूसित कस्तो व्यवहार गर्नुभयो?
प्रेरितहरूको चर्चमा महिलाहरूको भूमिका के थियो?
प्रेषित पावलले उक्त आइमाईको कपालको लम्बाई र टाउकोको बारेमा के भन्छ?
महिला समुदायमा मौन छन्!
१ तिमोथी २,११-१– को बारेमा प्रश्नहरू?
ज्ञानको स्रोत वा लुकेको खतरा?
महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ प्रदान गर्दछ र बाइबलले आत्मिक संसारको बारेमा के भन्छ भनेर देखाउँदछ।
के त्यहाँ आत्मिक संसार छ?
के त्यहाँ शैतान छ?
के हामीले ताराहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ?
सबैको लागि शुभ समाचार
परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार
प्रेरितहरूले के सिकाए?
पावलले सुसमाचार प्रचार गरे
नरक को लागी लडाई
नरक आज एक सबैभन्दा चर्का बहस को जन्म दिन्छ
इसाई समुदाय भित्र।
भगवान हुनुहुन्छ। , ,
यदि तपाईं भगवान्‌लाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ
कसरी परमेश्वर आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ
Me म बाहेक अरू ईश्वर छैन »
परमेश्वर ख्रीष्टमा प्रकट हुनुभयो
एकमा तीन र एकमा तीन
भगवान संग मानव सम्बन्ध
येशू ख्रीष्ट, क्रूसमा टाँगिएको
प्रभुको टेबुलमा हाम्रो स्थान
ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट क्रूसीसन
येशूको अन्तिम उपदेश
येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान - छुटकाराको लागि हाम्रो आशा
खाली चिहान - विश्वासको कारणहरू
ऊ जीवित छ!
दैनिक जीवनमा विश्वास गर्नुहोस्
महान रोल मोडेलहरू
विश्वास र निरीक्षण
के भगवान केहि असम्भव हुनुपर्छ?
छुटकाराको लागि आवश्यकता
येशूले हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुभयो
भगवानको बच्चा बन्नुहोस्
अनन्त जीवन को उपहार
हामीलाई सुसमाचार चाहिन्छ - शुभ समाचार।
ख्रीष्टको सुसमाचारले मनोशान्ति ल्याउँछ,
शुभकामना र व्यक्तिगत जीत।
यहाँ र अहिले भविष्य बाँच्न कल
ख्रीष्टमा शान्ति खोज्नुहोस्
एक अर्कालाई माया गर्नुहोस्
नयाँ विचारहरूसँग डिल गर्दै
कानून र वाचा
परमेश्वरको विश्राममा जाओ
नयाँ बोतलहरूमा नयाँ मदिरा
परिवार संग सम्बन्ध
विपरीत लिंग संग सम्बन्ध
प्रकाश: विजयको दर्शन
भविष्यवाणी, सर्वनाश - फरक, बुझ्नुहोस्
पाठो योग्य छ
भविष्यवाणीहरूको अर्थ राख्नुहोस्